Ukwephula iminyaka engama-50 yesiko, i-InverPad kungubuchwepheshe bangempela obuthuthukiswe ngu-Aquark. Ngokuhlanganiswa okuphelele komklamo wePad, i-Stepless-DC-Inverter nobuchwepheshe bokulwa nomsindo, kuthuthukisa isipiliyoni sokubhukuda esigabeni esisha.
Jabulela Ukuthula Kweqiniso
Ebangeni le-1 imitha, amava womsindo aphansi njengo:
36.5dB (A)Imodi yokuthula
46dB (A)Imodi Yokwandisa
STEPLESS DC NGEKE
I -lessator ye-DC engahambeki ivumela i-compressor ukuthi ijubane ijubane ngokususelwa kwezidingo nemibandela yangempela. Imvamisa ne-RPM zingashintshwa ngamunye ngamunye ukunikeza ukusebenza okumangalisayo konga amandla kanye nokuthula okuphelele.
Mr.Titan-Top Dischargelessless Inless Pool Heat Pump
I-InverMax Commerce Inverter Pool Heat Pump 60 / 110kw
I-AquaMini-Pool Heat Pump
Bheka ukuthi kwenzekani ngathi!
Thu-Jun-2021 Funda kabanzi
Fri-May-2021 Funda kabanzi
Mon-Mar-2021 Funda kabanzi
“Sikhulise ukuthengisa kwethu ngepompo lokushisa ngabonga abathathu kuMnu. Lapho amakhasimende eyibona endaweni yethu yokubukisa, akhangwa yi-aluminium casing yayo enhle kakhulu. Lapho-ke kufanele bayizwe nje iphenduka beqiniseka ukuthi kungumkhiqizo omuhle kakhulu. Simele ...
UFuzei Gabor - nagyker.kerex.hu
“Abathengisi nabakwaKorea baseHungary namakhasimende asevele enomnumzane uSilence bayawubonga lo mklamo wawo oyingqayizivele. Kubukeka njenge-amplifier ehholo lekhonsathi! Yini okumangazayo futhi ehlukile umkhiqizo kusuka kubaqhudelani kungukusebenza okuphelele buthule ...